Actorylọ ọrụ Aluminom Door System, Ndị na - eweta - China Ndị na - emepụta Aluminom Door System
Sisiike windo FOEN Smart4-FOEN J100
Usoro FOEN J100 na-eme mkpọtụ na-enye usoro zuru oke maka ụlọ ahụ; a na-emechi mpempe roba atọ, na etiti roba dị n'etiti na-enye egwuregwu zuru oke na ọrụ nke ụkpụrụ mmiri ozuzo, nke mere na ngwaahịa ahụ nwere ezigbo ikuku na arụmọrụ mmiri.Higher metal steel nwere ike nweta mmeghe nke nnukwu akụkụ, dị mfe iji gboo mkpa nke ụlọ dị iche iche; Nhazi ihe eji achọ mma n’èzí na-emekwa ka ngosipụta ụlọ ahụ dịkwuo mfe ma mara mma, dabara adaba maka ọrụ etiti na elu-elu.
Sistem Window Smart FOEN 5-FOEN J168 Atọ Njikọ atọ
FOEN J168 sistemu ụzọ na-eme ọfụma na-enye usoro zuru oke maka ụlọ ahụ; a na-emechi mpempe roba atọ, na etiti roba dị n'etiti na-enye egwuregwu zuru oke na ọrụ nke ụkpụrụ mmiri ozuzo, nke mere na ngwaahịa ahụ nwere ezigbo ikuku na arụmọrụ mmiri.Higher metal steel nwere ike nweta mmeghe nke nnukwu akụkụ, dị mfe iji gboo mkpa nke ụlọ dị iche iche; Nhazi ihe eji achọ mma n’èzí na-emekwa ka ngosipụta ụlọ ahụ dịkwuo mfe ma mara mma, dabara adaba maka ọrụ etiti na elu-elu.
Zọ ụlọ nchekwa FOEN na-enye ihe eji achọ mma nke nwere oke dị mma, ọnụ ụzọ ime ụlọ Bi-fold dị mma maka mpaghara ntụrụndụ. Ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe a ma ama bụ na n’aghọ ogwe azụ, ọ nweghị ihe dị n’etiti gị na ndị ukwu n’èzí. Sistemụ dị na mpụga na-enyere nhicha dị mfe yana sistemụ dị ala na-enye arụmọrụ kachasị.
Enwere ike iji ọnụ ụzọ Bifold nwee njikọ na windo Bifold ma nwee ike ịnwe ụzọ aka ekpe ma ọ bụ aka nri iji dabara n'ụlọ gị.
Doorwin nwere ọnọdụ ịnye ezigbo uru na windo aluminom osisi kachasị mma. Anyị na-achọ ime ka ngwaahịa ndị na-adịgide adịgide, ike ọrụ na ọmarịcha ịnweta mmefu ego niile. Anyị na-agbasi mbọ ike ịnye ahụmịhe ọrụ ndị ahịa kachasị mma na ndị ọrụ raara onwe ha nye na ndị injinịa maka ọrụ aka oru na otu ndị ahịa nwere onyinye nke na-aza ajụjụ ngwa ngwa.
Profaịlụ ụlọ ọrụ kachasị mma nke Aluminom sitere na China mere
Profaili Elu Aluminium Profaịlụ nke Mkpuchi Mgbakwunye Wall46
6063 T5 T Slot Track Industrial Aluminom Extrusion Profaili